होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / नायिका निशा अधिकारी सगरमाथाको चुचुरोमा
नायिका निशा अधिकारी सगरमाथाको चुचुरोमा	21 May 2013 | 10:10am मङ्गलबार ७ जेष्ठ, २०७०
काठमाडौं – नायिका निशा अधिकारी आज बिहान ८ बजे सगरमाथा चुचुरोमा पुग्न सफल भएकी पर्यटन बोर्डका सम्पर्क अधिकृत सगरमाथा आरोही ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन्। अधिकारी चैत २७ गते काठमाडौंबाट सगरमाथा आरोहणको लागि प्रस्थान गरेकी थिइन्। उनीसँगै १२ जना टोली सगरमाथा आरोहणको लागि गएको थियो। अधिकारी आरोहीको सहयोगीको रुपमा सगरमाथा चुचुरोमा चढेकी हुन्। उनी भोली काठमाडौं आइपुग्ने बताइएको छ।
यसैबीच सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर फर्किँदै गर्दा दुई विदेशी आरोहीको मृत्यु भएको छ । सगरमाथाबाट फर्किने क्रममा गएराति उनीहरुको मुत्यु भएको हो। बिना अक्सिन फर्किँदै गर्दा बंगलादेशका मोहम्मद खलिल हुसेन र कोरियाका सुङ हो सियोको सोमबार राति मृत्यु भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। दीपककी छोरी हिरोइन बन्ने! »
निशाले फेसबुक स्ट्याटस डिलिट गरिन् आर्मी हेलिकप्टरमा हिरोइन! निशाले भनिन् स्वर्ग पुगे जस्तो भयो सगरमाथाबाट ओर्लिन झन् गाह्रो : निशा अधिकारी एकै दिन डेढ सय आरोही सगरमाथा शिखरमा प्रतिक्रिया